Indlela enhle yokuthola imininingwane efanele ngokwesibonelo ngokusebenzisa abanye abangane bakho, ngoba ezikhathini eziningi kunezinto esingazibambi kodwa ezingaba lusizo olukhulu kithina | Instituto de Educación Superior Tecnológico Público "CHOCOPE"
Indlela enhle yokuthola imininingwane efanele ngokwesibonelo ngokusebenzisa abanye abangane bakho, ngoba ezikhathini eziningi kunezinto esingazibambi kodwa ezingaba lusizo olukhulu kithina
por admin_chocope | Abr 30, 2022 | pasadena-1 dating | 0 Comentarios
Kungenzeka ukuthi uzithole ukwenye yalezo zimo lapho uthandana nomuntu kodwa bakuthatha njengomngani kuphela, for the okusobala ukuthi iyakhathaza kakhulu futhi engaba ngisho nokudabukisa impela, ngoba kwesinye isikhathi kungadonsa isikhathi eside ukwedlula lokho kudingekile. Ngaleso sizathu sizokunikeza uchungechunge lwe amathiphu okuphuma endaweni yomngani, ukuze nikwazi ukuzikhulula ngaphezu kwakho konke ngenhloso yokuthi kuhamba kahle futhi niqale ubudlelwano ndawonye, ??futhi esimweni esibi kakhulu ukuzikhulula futhi nikwazi ukuqhubekela phambili ngokwamukela amathuba amasha ikusasa elisinika wona.
I-friendzone yilelo limbo esizithola sikulo nini sikunye nomuntu esimthandayo kepha asikwazanga ukuveza imizwa yethu, ukuze lo muntu abheke ukuthi singabangani bakhe kuphela nokuthi akasekho phakathi kwethu.
Njengomthetho ojwayelekile, kusithatha isikhathi eside ukubona ukuthi sikulesi simo, ukuze kuthi, yize sazi ngempela ukuthi lo muntu akayazi imizwa yethu, sivumela isikhathi sidlule ngethemba lokuthi ngelinye ilanga konke kuzoba ixazululwe futhi sizothola indlela efanele yokuhamba. impendulo yomlingo ukuze sikwazi ukuba secaleni lakhe ngaphandle kokufihla imizwa yethu.
Iqiniso ngukuthi lokhu kwenza yonke inqubo ithathe isikhathi eside kunesidingekile, okusho ukuthi ekugcineni sithola ukuthi sizizwa sikhungatheka ngokwengeziwe, ngasikhathi sinye ukuthi asinakho okunye esingakwenza ngaphandle lalela imizwa yakho maqondana nabantu besithathu, okusenza sizizwe siba sibi nakakhulu.
Ngaleso sizathu, isikhathi sesifikile sokushintsha we-processor bese sihlukana nesimo, esizokunikeza uchungechunge lwezeluleko esethemba ukukusiza ngazo shiya indawo yomngani ikhanda lakho liphakeme namathuba aphezulu okuphumelela.
Amathiphu ethu okuphuma endaweni yomngani
Okulandelayo sizonikeza imininingwane ngamathiphu aphambili okuphuma endaweni yabangane, kepha khumbula ukuthi kubalulekile ukuthi sisebenzise ubuhlakani futhi sivumelanise nesimo sethu esithile, okungukuthi, akuyona yonke imibhangqwana yabantu bonke efanayo, ngakho-ke njalo kufanele sinake imininingwane futhi siyisebenzisele inzuzo yethu ukufeza inhloso yethu.
Yazi ukuthi usendaweni yomngani
Lokhu kufana nokulutha kwezidakamizwa, ngoba uma ungakwazi ukuvuma ukuthi ungumlutha, ngeke ibe khona indlela ongayeka ngayo futhi uzikhulule, ngakho-ke kusobala ukuthi iseluleko sethu sokuqala ukuthi uyazi ukuthi ucwiliswe ngokuphelele endaweni yomngani, ukuze sikwazi qala ukuthatha izinyathelo zokuphuma kukho.
Khumbula ukuthi ukwenqaba kulezi zimo ngeke kusisize ngalutho, futhi izinyathelo ezinhlanu nezaba azisizi nathi, okungukuthi, lokho esikushoyo nge «Akayazi imizwa yami, kodwa ngithatha izinyathelo zokumenza angithande»,»Angikho endaweni yabangane, kepha ngilalela izinkinga zabo ukuze bazi ukuthi bangangethemba futhi ngaleyo ndlela bathandane».
Fundisisa isimo sakho
Lapho sesibonile ukuthi sikulesi simo, towards the elandelayo ukucubungula indlela esibugcina ngayo ubudlelwano, okusho ukuthi, luphi uhlobo lokuthembana olukhona nokuthi yiziphi izibonakaliso esikwazile ukuzithatha ngendlela umuntu abona ngayo thina.
Lokhu kubaluleke kakhulu, ngoba siyazi kahle imizwa yethu ngaye, kepha akanalo nolwazi olukude kakhulu nolwethu, ngakho-ke asinakukusho ngokuluhlaza okwesibhakabhaka noma ngabe kungalimaza ukuzethemba, kepha kufanele siqale ukuhlola amanzi futhi aqonde kahle lokho akubona kithi lapho esibheka.
Kwesinye isikhathi kungaba wuthando nje, ukuqonda futhi, kokunye okuningi, kukhona ngisho nothando, kepha ngokungathathi igxathu eliya phambili, ekugcineni ubuhlobo bunweba futhi, qiniseka, uma siseside isikhathi endaweni esikuyo, kuzoba nzima kakhulu ukuphuma ngempumelelo, ngoba ukwethembana kuzoba kukhulu futhi lokhu kuzokwenza kube nzima ngempela ukuthi nigcine nindawonye.
Isikhathi sokuvuma izono sesifikile
Lapho usuthole konke kucacile, okulandelayo kuzoba vula futhi uvume imizwa yakho kulowo muntu. Kubaluleke kakhulu ukuthi sibuthakathaka, okusho ukuthi, akufanele singethuki bese silahla ibinzana ngekhanda ngasikhathi sinye, kepha okuhle ukuthi silungiselele we-aphoyintimenti lapho sisodwa, sizolile futhi sinesikhala nesikhathi esanele ukuze sikwazi ukuchaza lokho esikuzwayo, ukuze angabe esaphoqwa ukuthi athathe isinqumo kepha ezwa ukuthi angaba nesikhala sakhe sokuzindla nganoma yini abona ifanele kakhulu.
Vele, siqala kusukela kusisekelo sokuthi kusukela manje izinto phakathi kwethu zizoshintsha, kepha kuyadingeka ukuthi zishintshe, ngoba uma kungenjalo besiyobe sizikhawulele futhi sizihluphe impilo yethu yonke. sichithe iminyaka yethu yobusha kanjena ukuze ekugcineni singamtholi lowo muntu?
Ususithathile isinqumo sokuthi ufuna ukushiya we-friendzone, ngakho-ke sikucebisa ukuthi ungabuyeli emuva, futhi ukuhlala kanjena akunampilo kunoma ngubani, ngakho-ke kufanele uthole yebo noma cha ngakubo.
Akunakushiwo, ukuthi kubaluleke kangakanani ukuhlela kahle lokhu kuqokwa, phakathi nosuku, futhi impela ubuso nobuso. Akukho lutho lokuthumela imiyalezo noma kunjalo akufanele sibe notshwala ngaphambi komzuzu, ngoba lokho kungasenza senze ngendlela ehlukile kunaleyo esiyikho, okungasithinta kabi.
Lindela impendulo evela kuwe
Sesikwenzile konke uku shiya indawo yomngani bese uzama ukuthola impumelelo ebudlelwaneniNgakho-ke manje ibhola selisenkantolo yakhe, okusho ukuthi kufanele silinde yena ukuthi athathe isinqumo bese esitshela ngaso.
Kumele siqale ngesisekelo sokuthi kuyisinqumo esinzima kakhulu, ngoba uyasithanda impela, kepha akazi ukuthi lokho akusizwela ngempela uthando noma umuzwa umuntu anawo ngomngane wakho awuthandayo nothandayo njengo okusho ukuthi kuzothatha isikhathi ukusula, futhi-ke futhi nesikhala.
Ngale ndlela, kubalulekile ukuthi sishiye umkhawulo, okusho ukuthi ngeke sithumele imiyalezo noma sishaye izingcingo noma sifune lo muntu noma kuphi ukuze asinike impendulo, kepha sizomvumela kube nguye oxhumana nathi uma wenza isinqumo sokugcina.
Kodwa-ke, kufanele futhi sikhumbule ukuthi imizwa yethu ibalulekile, ukuze kuthi uma sibona ukuthi izinsuku ezimbalwa ziyadlula futhi asinayo impendulo, singazama ukuxhumana nabo ukuthola ukuthi bayazindla ngempela yini noma cha ngokuphambene bazizwa bengakhululekile. Akufanele neze samukele izinyathelo eziyingxenye, okungukuthi, Sinqume ukushiya we-friendzone, yingakho sesivele sinezinyathelo ezihhafu; impendulo inguyebo noma impendulo inguye, kepha phakathi azikho ezinye izindlela esingazisebenzisa.
Ukusabela kwakho empendulweni yabo
Esinye isici okufanele sisicabangele ukuthi sizosabela kanjani empendulweni yakho. Ngokusobala sinethemba lokuthi uzovuma ukuba nguzakwethu noma okungenani azame, futhi uma siphumelela, impela singajabula njengoba sifuna, kodwa phambi kwakhe sizokwenza ngokulinganisela, ngoba asikwenzi lokho kufanele kubonakale bephelelwe yithemba noma bephula isithombe anaso ngathi.
Kodwa-ke, futhi kungenzeka ukuthi asivume kithi ukuthi uncamela ukuqhubeka nobudlelwano, ngakho-ke i-priori asikwazanga ukusungula ubudlelwano naye, kepha umhlaba awugcini lapha. Into the yokuqala ukuthi manje sikhululekile ngokuphelele ukufuna injabulo kwenye indawoNgakho-ke uma esilahla, okuwukuphela kokunye esinakho ukwahlukana naye.
Ungacabangi ukuthi ukuba seduze kungashintsha umqondo wakhe, ngoba yiyona nto yokugcina ezokwenzeka. Noma kunjalo, ngokushiya uhlangothi lwakhe kungenzeka ukuthi ngokuhamba kwesikhathi abone ukuthi besibaluleke kangakanani empilweni yakhe, okusho ukuthi ungabuya uzocabanga kabusha ngesimo bese ucabanga ukuqala ubudlelwano nathi.
Ngakho-ke uma impendulo inguye, ungafaki noma yiluphi uhlobo lombukiso, kepha kwenze kucace kuye ukuthi imizwa yakho ingeyangempela, ukuze ungakwazi ukuqhubeka eceleni kwakhe ngoba kungaba ukuhlala uhlushwa ngothando olungenakwenzeka.
Kufanele aqonde, yize kungenzeka ukuthi uzokushayela kamuva, kepha ngalokhu mqondo kufanele ungagunci, okusho ukuthi Kufanele umcele ukuthi ahloniphe isikhala sakho futhi akuvumele ukuthi ukhalile usizi lwakho wedwa.
Siyakukhumbuza lokho ngokuhlukanisa sandisa amathuba okuthi ngokuzayo aphinde abe nesithakazelo kithi, futhi uma kungenzeka ukuthi lokhu akunjalo, okungenani sizobe sesiphumile kulolo gibe ebesicabanga ukuthi siyaphila kodwa empeleni bekusikhawulela nje futhi bekusenza sizizwe ukuthi singabantu abancikile futhi ngaphandle ikhono lokuzuza injabulo sisodwa, on okuzokwenzeka kusukela manje uye phambili ukuthi lokhu akunjalo nhlobo, ngakho-ke, noma ngabe ethi yebo noma ethi cha, uzobe uzikhulule futhi uzobe usuqale okusha umjikelezo empilweni yakho lapho uzojabulela injabulo enkulu.